လွှတ်တော်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပါတီတစ်ခုတည်း၏ လိုလားချက်အတိုင်း သွားနေသည်ကို တွေ့နေရ? - Yangon Media Group
လွှတ်တော်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပါတီတစ်ခုတည်း၏ လိုလားချက်အတိုင်း သွားနေသည်ကို တွေ့နေရ?
လွှတ်တော်များအတွင်းရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပါတီတစ်ခုတည်း၏ လိုလားချက် အတိုင်းသွားနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးက ပြောဆိုသည်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနှင့် အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ပြည် နယ်ရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာ စုပေါင်းပေးအပ်ပွဲနှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီနေ့ လွှတ်တော်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အထူးသဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဟန်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်ပါတီထဲက တစ်ဖွဲ့ထဲကပဲ လွှမ်းမိုးထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့အဆုံးအဖြတ်တွေ၊ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အဆုံးအဖြတ်တွေဟာ ဖြစ်မလာဘဲနဲ့ ပါတီတစ်ခုရဲ့ လိုလားချက်အတိုင်း သွားနေတာ တွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာကို ဝင်ပြိုင်တယ်ဆိုတာဟာ အဲဒီဟန်ချက်ပျက်နေတဲ့လွှတ်တော် ကို တစ်နေရာရလဲ တစ်နေရာ ကျွန်တော်တို့ ဝင်ပြီးတော့ထိန်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝင်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို အနိုင်ရစေလိုသည့်အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များရှိ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် မြစ်ကြီးနားရှိ အမျိုးသားလွှတ် တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင်တော့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ဟန်ချက်ပျက်နေသည့်လွှတ်တော်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ NLD အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်မည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်(စနေ နေ့)တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ် တော် လေးနေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ် နေရာနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရှစ်နေရာတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
MH 17 ပစ်ချခံရမှု သြစတြေးလျ၊ နယ်သာလန်နှင့် ရုရှားတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် ပန်ဒါ စက်ရုံလ